Photos waa hab fiican oo lagu hayo xusuus of our fasaxyada, safarada ama xusuus dugsiga. Iyada oo Chine collage mid si fudud edit karaa sawiro iyo iyaga oo asxaabta iyo qoyska wadaagaan via Instagram. Waxaa jira soo diyaariyeen ballaaran oo ka mid ah barnaamijyadooda collage lacag la'aan ah Instagram in suuqa laga heli karo ee telefoonada android iyo iPhone iyo sidoo kale kaamarooyinka. Ha noo eegto 10 ka mid ah barnaamijyadooda collage kuwan.
Waxaa laga yaabaa in ka badan arrin kasta oo kale oo ka dib awoodaha Raadka, si guul leh dhiirogelin dabeecad waa mid aad ku tiirsan tahay file asalka u ah qof aad la shaqaynayso. Wixii animation gudahood ka dib Raadka, waxaad u baahan tahay nooc gaar ah oo file qof, halkaas oo gabal kasta oo qof aad rabto in aad nooleyn waa lakab oo kala duwan. Kuwan waxaa inta badan abuuray ee muujiye, si kastaba ha ahaatee haddii aadan haysan muujiye ama haysan awood u leh inay barbaro qof adiga kuu gaar ah, waxaa jira kuwa xor ah laga heli karaa bogga internetka si ay u isticmaalaan si aad u farsamadiisa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya qof ah in uu leeyahay qayb kasta oo kala kala layers shaqsi.
2. collage ahaysiiya
Jacayl ugu fog u nooca tagaa haan la hal-abuurka weyn. Qaabka uu qalbiga ku jira waxa ay calaamad u tahay in ay muhim u tahay aadanaha oo ka mid ah doonayaan inay ka encapsulate oo dhan photos in qaab kale ee wadnaha. Waa sahlan oo kaliya download af collage. Waxaa Lahaanshaha in aad telefoonka waa fikrad aad u fiican tan iyo markii aad la ciyaareyso oo ay la socdaan qaabab kala duwan sida xiddigaha, nabad calaamadaha-sida qoolley oo kale. Haddii aad lover ka mid ah dhirta, tusaale ahaan, waxaad ku taagan tahay fursad weyn in la abuuro loox sawir aad in kuwa muuqaalo la doonayo sida geed oo timir ah.
Oo halkaas waa inaad maryo la xiriira ay guddi mashruuca aad dabeecadaada iyo.
3. Photo app collage xirneeyn qeybiyaha
App Tani waxaa laga heli karaa labada android iyo macruufka. Waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu isticmaalay tan iyo markii uu in ka badan 50 milyan oo caalamka ah ayaa ku isticmaalaya. Waxay leedahay arrimo lacag la'aan ah dhinaca kala duwan stickers iyo jeeda kala duwan oo aad u. App Tani u qalmaa inuu ka mid barnaamijyadooda sare ugu jeclaa noqon tan iyo markii ay awood u user ay u xaalkaa videos ka sokow waxaa noocyada collage free ad fudud.
4. baaqay collage
App Tani inta badan taabto wadnaha ee da'da yar. Waxay leedahay qurxinta ku haboon caruurta gaar ahaan lagu bilaabo. Mid ka mid ah sameysmi karaa qaabab foosha xun sida keega, siddo iyo xayawaanka la sawiro ah. Marka aad furto app this on your iPhone, waxaad arki doontaa sawirada cagaaran daqiiqadii ugu geesaha sida mid ka mid ah ururinta ee lagu bilaabo.
5. Cropic app tafatirka sawir
Ma waxaad tahay daal la abuurka ah square ee Instagram? Waa hagaag, download app tafatirka sawir cropic u sahli doona in aad iska daynayaan ka gees ah ku tafatirka. Waxay leedahay nidaamyo kala duwan oo ah kuwo gaar ah oo fudud. All inaad samayso waa soo qaado asalka ah in aad sida iyo soo baxaan sawirkaaga ku saabsan asalka in. Khaanadaha ma laga arki karo khariidad cusub. Android iyo macruufka users ka faa'iideystaan ​​app bilaash ah oo aad kala socon kartaa oogayo by lagala soo Google Play iyo Apple Store.
6. Tafatirka app sawir Splitpic
Marka tirada, lix waa app ah in qaybiyaa camera ah lix qaybood helaa. Iyadoo app this, aad si xor ah fiyuus kartaa sawirro kala duwan si ay u abuuraan images weyn on loox. Tusaale ahaan, waxaad ku milmaan karaa jirridda timirta ah la laamo geed oo timir qallalan. Qofka qaba hal-abuurka ku raaxaysan karaa iyadoo la isticmaalayo app tan iyo mid fuuli karaan sawiro fool xun. Xusuusnow app waxa loo heli karaa labada android iyo macruufka sidoo kale u downloads xor ka ah dukaanka.
7 .Frame collage swagg app
Tani waa app lacag la'aan ah oo ganaax ah iPhone in aad kala bixi karto Apple Store. Waxay caan ku tahay collage fudud 50 Layouts ee app waa mid aad u eegayey midabyo soo jiidasho leh. App Tani habboon bilowga ah tan iyo markii aad Don uma baahna wax aqoon ah ee design. Midabo Kuwani kor loogu qaado quruxda isku darka swag jir. Midabada la helay karaa cap midabka. Waxaad sidoo kale ka ciyaari kara iyo qaar ka mid ah ku darto text sawir ku saabsan.
Muuqaalka gaar ah oo ku saabsan app tani waa in ay ka kooban tahay in ka badan ka badan laba boqol iyo soddon Layouts (230). Marka la isticmaalayo picStitch waxaad ku dari kartaa qoraalka si aad sawiro iyo sidoo kale isticmaalka filtarrada. Waxa kale oo aad u bedeli karaan sawiro memes in app this. Feature ugu weyn in dadka isticmaala ay qasab waa khariidad ee maalintii. Waxay sameeyaan kor qaabka maalin kasta ka duwan barnaamijyadooda kale. Mid ka mid ah khasaaro weyn ee app tani waa in xayeysiis kor u soo booda aad u baahan tahay in mararka qaarkood iyaga u cusboonaynta.
Wixii Instaframe waa app ah in kuu ogolaanayaa inaad la ciyaaro tafatirka font in sawiro aad u. Mararka qaar, waxaad fiirin kartaa sawir aad saaxiib ee Instagram in uu leeyahay emojis oo waxaad la Yaabteen nooca app Fasha Arrintaas. Si fudud u dejisan iyo wanaag aad u doonaa in uu soo saaro waxyaabo la mid ah.
Collage 10. boorish
Tani app android shaqeeyaa si la mid ah sida splitPic ay kuu oggolaadaan in aad ku milmaan sawiro. Faraqa kaliya ee waa in la boorish aad u leedahay in meel jidka ka baxsan sheegyada gelinaya naqshado kala duwan ee doorashada. Waxa kale oo uu leeyahay feature dalagga iyo edit ah, oo aad shaqada sahli. Wixii user iPhone aad kala soo bixi kartaa PhotoBlend app ka Apple Store oo lacag la'aan ah.
Iyada oo dhan barnaamijyadooda Instagram kor ku xusan, waxaad soo bandhigi kartaa hal-abuurka iyo ciyaaro agagaarka leh iyo muujiyaan naqshado waalan oo soo jiidasho leh.
> Resource > Apps > 10 Best Free Instagram collage Apps Waa inaad isku daydaa